CC Warsame: Waa in la xaddido awoodahada hay’adaha Dawladda | KEYDMEDIA ONLINE
Kadib markii Soomaaliya ku dhawaaqday in ay dib u soo celisay xiriirkii ay la laheed Keynya, waxaa soo baxay shaki la xariira dhowr arrimood, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir CC Warsame ayaana ku taliyay in la xaddido awoodaha hay’adaha Dowladda Fadaraalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa ku baaqay in shirka loo madlan yahay 20-ka bishaan mudnaanta koobaad la siiyo, hubinta owoodaha Dowadda Fadaraalka, wuxuuna walaac ka muujiyay heshiiyo khatar ah oo ay gali karaan.
“Shirka madlan 20 ka bishan Meey waa in mudnaanta koowaad la siiyo sidii loo xaddidi lahaa awooda hay’adaha dawlada Federalaka ah, si looga badbaado heshiisyo halis gelin kara danta qaranka Soomaaliya”. ­Ayuu yiri Warsame.
Hadalka hoggaamiyaha Wadajir ayaa ku soo aadaya, kadib markii Dowladda Fadaraalka ay galinkii danbe ee shalay ku dhawaaqday in dib loo soo celiyay xiriirkii diblumaasiyadeed ee ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo aan wanaagsaneyn bilihii la soo dhaafay.
Shaki xoog leh ayaa hareeyay go’aanka ay ku dhawaaqday Soomaaliya, si daah furan looma soo bandhigin waxa lagu af-gartay, waxaana la rumeysan yahay in dano qaas ah oo ay leedahay Dowladda Qatar awgeed, Dowladda Soomaaliya u ogolaatay heshiiskaan.
Wafti ka socday Dowladda Qatar, ayaa bishii hore tagay dalka Congo DR, maalmo kadib Madaxweynaha waddankas Félix Tshisekedi, ayaa casuumaad u fidiyay Hoggaamiyayaasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya, Farmaajo iyo Kenyatta, kuwaas oo labo maalin oo isku xigta ka degay caasimadda Congo ee Kinshasa.
Ergayga gaarka ah ee Wasaarada arrimaha dibadda Qater u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta, Dr.Mutlaq bin majed Al-Qahtani, ayaa dhankiisa safar ku yimid labada waddan, wuxuuna socdaalkiisa ka billaabay Hargeysa, kadib wuxuu ka degay Muqdisho, isagoo uga sii gudbay Kenya.
Heshiiskaan oo ay gar wadeyn ka ahayd Dowladda Qatar ayaa la rumeysan yahay in u jeedka ay ka leedahay uu yahay mid ka sareeya taageerada ay siiso Farmaajo, waxayna u bira tumaneysaa gurashada kheyraadka badda Soomaaliya.